Kubatana kweHyperbaric - Hyperbaric Oxygen Therapy HBOT
musha/About Tekna Hyperbaric/Kubatana kweHyperbaric - Hyperbaric Oxygen Therapy HBOT
Kubatana kweHyperbaric - Hyperbaric Oxygen Therapy HBOTteknamfg2018-01-04T18:19:33+00:00
IACHM inyanzvi inoshandiswa pakushandisa zvakakodzera, mitemo yekuchengetedza, dzidzo, kurovedzwa, chiziviso, nekuzivikanwa kwe hyperbaric oxygen therapy sechipatara chakasiyana chakasiyana-siyana.
IAmerican College yeHyperbaric Medicine yakatangwa mu1983 mukutsigira vanachiremba vanoita mushonga we hyperbaric uyo akaziva kukosha kwehutano hwehutano mumagariro ekurapa, kunyanya maronda ekurapa.
The DAN Medical ruzivo vashandi vehurumende ye24-hour hotline yechirangaridzo uye inonyanya kushandiswa pakusununguka, kuvepa ruzivo rwemishonga yekurapa uye kushandiswa kwezvokurapa.
Kutsvakurudza uye kutsvakurudza ndiwo maitiro ezvesayenzi. Rubicon Foundation inotanga mapurogiramu anobatsira pakuwedzera kwekunzwisisa kwevanhu.
Caribbean Hyperbaric Medicine yakanyora uye inotungamirira zvidzidzo zvishanu zvehurumende dzakagamuchirwa (dzakagamuchirwa neThe National Board of Diving uye Hyperbaric Medical Technologies uye American College of Hyperbaric Medicine). Iyi dzidzo dzinoshandiswa munyika dzakawanda nevarapi nevamwe vanobatana nehutano hwehutano hwepamusoro kuti vawane ruzivo rwehutachiwana hunotarisirwa kuti vawane hutachiona hwehutano kune varwere.
Caribbean Hyperbaric Medicine inopawo 12 dzidzo dzakagamuchirwa neDiver's Alert Network (DAN)
Basa reVeterinary Hyperbaric Medicine Society nderekusimudzira sayenzi uye kliniki yekushandiswa kwehutachiona hwehutachiwana mumhuka uye mishonga yevanhu kuburikidza nokusimudzira dzidzo, kuwanikwa, uye kubatana.